Love Archives - ReaderGonnaRead
ခေါင်းစဉ်ကြောင့် နည်းနည်းကြောင်သွားနိုင်တယ် ချစ်သူမထားမှတော့ အသဲကကွဲပါဦးမလားပေါ့ ပြောချင်တာက ချစ်သူမထားပါနဲ့ ရည်းစားထားပါ ရှုပ်သွားလားတော့မသိ.. ဒီလိုစိတ်ကစားတတ်တဲ့အရွယ်မှာ ရည်းစားတွေကြိုက်သလောက်ထားပစ် ထားလို့ရတယ် ၃ယောက်၎ယောက် တစ်ပြိုင်နက်တွဲရုံမကလို့ တစ်နေ့တစ်ယောက်ပဲတွဲတွဲ.တစ်ခုတော့ရှိတယ် ချစ်သူလို့တော့မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ များသောအားဖြင့်လူတွေက ရည်းစားလေးတစ်ယောက်ရလာရင် အဲ့လူကိုအရုးအမူးချစ်မိသွားတယ်လို့ ထင်နေကြတယ် ဒီလူမှမရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူး ဆိုတာမျိုး.တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.အဲ့တာက ခဏတာမွှန်တယ်ပြောမလား.အဲ့ရည်းစားနဲ့တွဲတာ ၃ လကျော်လောက်ကြာရင်သိလာလိမ့်မယ်.. စတွဲချင်းတုန်းကည၂နာရီ…
mrminyan July 26, 2019
လမ်းဘေးခွေးတွေဟာ လမ်းကြိုလမ်းကြားတွေထဲမှာပဲ နေထိုင်ရင်း ကြင်နာသနားတတ်သူတွေက ပေးကမ်းကျွေးမွေးတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်လေးတွေပေါ်သာ မှီခိုနေရပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ယူကရိန်းနိုင်ငံက တိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကနေ လမ်းဘေးမှာ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ အပြာရောင်မျက်လုံးနဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကို တွေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဂေဟာကနေ အမျိုးမျိုးပြုစုကုသမှုခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာ ခွေးလေးဟာ အခြေအနေတော်တော်လေး ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ ဂေဟာက ဒီခွေးလေးကို မွေးစားနိုင်မယ့်သူရှာဖွေပေးဖို့အတွက်…
စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အင်္ဂါသား၊သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ကာကွယ်မယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါ သား၊သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်ဟလေ့မရှိတာကြောင့် အချစ်ရေးမှာ အထီးကျန်တဲ့ခံစားချက်မျိုး အမြဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို စကားလုံးတွေနဲ့ နာကျင်အောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးရှိပြီး အဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့် တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့…
အချစ်ရေးအဆင်မပြေဘူး၊ အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောနေကြတာ မကြာခဏဆိုသလို ကြားရပါတယ်။ တချို့ကဆို အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ကျိန်စာတွေ မိထားသလားမှတ်ရအောင် ကံကဆိုးပြီးရင်းဆိုးနေတာမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ တကယ်တော့ အချစ်ရေးကံကောင်းလာအောင် လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။ သိပ်လည်းမခက်ခဲပါဘူး။ အချစ်ရေးကံကောင်းဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကိုသာ လုပ်လိုက်ပါ။ ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ (၁) လူတိုင်းကို ကိုယ့်ဘဝထဲဝင်ခွင့်မပြုပါနဲ့ ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့နဲ့ ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ…
ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းပေါ်အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Hachi: A Dog’s Tale ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ လူနဲ့ ခွေးကြားက ရင်းနှီးခင်မင်မှုကိုဖော်ပြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဟာချီကိုဆိုတဲ့ ခွေးလေးဟာ သူ့သခင်သေသွားတာကို မသိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သခင်ဖြစ်သူက သူ့ဆီလာလိုလာငြား နေ့တိုင်း တိုကျိုရဲ့ ရှီဘူယာဘူတာရုံမှာ (၉)…
ချစ်သူနှစ်ဦး လမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါမှာ အမျိုးသားတွေက အပြင်ပန်းမှာတော့ ဘီယာလေးသောက်ရင်း၊ ဘောလုံးပွဲအကြောင်းလေးပြောရင်း ပြတ်သားတဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ နေနိုင်ကောင်း နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရ သူများတွေ ထင်နေကြသလို မဟုတ်ဘဲ အချစ်ရေးတစ်ခု အဆင်မပြေရင် အမျိုးသားတွေက ပိုပြီး ခံစားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေ၊ ပျော်စရာတွေ၊ ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာတိုင်း…
ချစ်သူကောင်းနဲ့ ဆုံတွေ့နိုင်ဖို့ မင်းသမီးတစ်ယောက်လို ချောမောနေစရာ မလိုအပ်ပါဘူး ….
mrminyan July 15, 2019
များသောအားဖြင့် ရုပ်ရည်လှပတဲ့ မိန်းကလေးတွေက ချစ်သူကောင်း၊လက်တွဲေ ဖ်ာကောင်းကောင်းနဲ့ဆုံဖို့ အခွင့်အရေးပိုများတတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ရုပ်အ လှ မပြည့်စုံတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကို မပိုင်ဆိုင်ဘူးလို့တော့ မဆို လိုပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက် နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ (၁)ငြင်းပယ်မှုဒဏ်တွေကို ပြင်ဆင်ထားပါ တစ်ချို့သော ယောက်ျားတွေဟာ လှတဲ့ မိန်းကလေးကိုမှ သဘောကျရွေးချယ် တတ်ကြပါတယ်။အင်တာနက်ဆိုရှယ်နက်ဝါ့ခ်တွေမှာ ဆိုရင် များသောအားဖြင့် သူတို့မျှော်နေတာက…
မောင်နှမတွေထဲမှာ အလတ်တွေပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အထူးအားသာချက် (၇)ခု
mrminyan June 30, 2019
သင်ဟာ မွေးချင်းထဲမှာ အလတ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အကြီးတစ်ယောက်လောက်ဂရုစိုက်မခံရဘူး၊ အငယ်လေးလောက် အချစ်မခံရဘူးလို့ ထင်ကောင်းထင်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အလတ်တစ်ယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းလာရခြင်းရဲ့ အားသာချက်တွေက အံမခန်းပါနော်။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ (၁) တခြားလူတွေသင်ပြစရာမလိုဘဲ ကိုယ်တိုင်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိ အလတ်လေးတွေဟာ မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ကိစ္စတွေကို နားလည်မှုလွဲတတ်ကြပေမယ့် အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူကမှတည့်မတ်ပေးစရာမလိုဘဲ သူတို့ကိုယ်တိုင် သင်ယူနားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ (၂) ရင့်ကျက်တဲ့သူလေးတွေ မိသားစုက…
Paul တီးတဲ့ စန္ဒယား သံစဉ်တွေနားထောင်ပြီးမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ မျက်မမြင်ဆင်ကြီး
Paul Barton ဆိုတဲ့ စန္ဒယားပညာရှင်တစ်ဦးဟာ ထိုင်းဘက်ကို နောက်ဆုံးခရီးသွားခဲ့ပြီးနောက် အဲ့ဒီမှာ လအနည်းငယ်ကြာအောင် နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုမှာ နေထိုင်နေစဉ် သူဟာ အမှတ်မထင်ပဲ Khwan ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ပြီး အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပါတယ်။ Khwan ဟာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဇနီးသည်နဲ့အတူ သွားရောက်ခဲ့ပြီး…
mrminyan June 29, 2019
အသဲကွဲနေပီလား?သင့်ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲထားလို့ဝမ်းနည်းနေလား? သင့် crush ကချစ်ရသူရှိသွားလို့ကြေကွဲနေရလား? ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ အားတင်းထားလိုက်ပါ။ (၁) သင့်ကိုချစ်တဲ့အခြားသူတွေတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် သူကသင့်ကိုမချစ်ပေမယ့် သင့်ကိုချစ်တဲ့အခြားသူတွေကိုမေ့မသွားပါနဲ့။သင့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ (၂) စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို အင်အားအဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပါ သူ့ကြောင့်ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို သင့်ဘ၀အတွက်အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလေ့လာရင်း ကုစားပါ။ သင့်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုချရေးထားပီးသူ့အကြောင်းတွေးမိလာတာနဲ့တန်းပီး ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလေ့လာပါ။ (၃) မေ့ပစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ သင်သူ့ကိုမေ့ပစ်ချင်တယ်လို့တွေးနေတိုင်း အမြဲတန်းသတိရနေသလိုဖြစ်နေမှာပါ။မေ့ပစ်ဖို့မကြိုးစားပဲ သူကိုယ့်အနားကထွက်သွားပီဆိုတာကိုလက်ခံဖို့ကြိုးစားပီးသင်ကသူ့ထက်သာတဲ့တစုံတယောက်နဲ့…